News | zidane
News | Tag: zidane
जिदानको नजरमा प्रिमियर लिगका यी खेलाडीहरु, हजार्ड आए, अरु के गर्छन् ?
एजेन्सी । रियल मड्रिड नयाँ खेलाडीहरूको खोजीमा रहेको छ । पछिल्लो समय उसको नजर प्रिमियर लिग खेलिरहेका खेलाडीमा रहेको छ । क्लबमा रहेका पुराना केही खेलाडीहरुलाई बिदा गर्ने योजनामा पनि रियल रहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
एजेन्सी । अन्ततः रियल मड्रिडमा ओझेलमा परेका खेलाडी ग्यारेथ बेललाई फ्यानहरुले बिदाई दिने मौका पाएनन् । बेललाई यो अवसर प्रशिक्षक जिदानले दिएनन् । आफ्ना फ्यानहरुलाई गुडबाइ नभनीकनै उनी मैदानबाट बाहिरिएका छन् ।
रियल मड्रिडमा ग्यारेथ बेलको यस्तो छ अन्तिम इच्छा, पुरा हुन देलान् त जिदानले ?
एजेन्सी । रियल मड्रिडमा ओझेलमा परेका खेलाडी ग्यारेथ बेललाई फ्यानहरुले बिदाई दिने मौका पाउलान् त भन्ने चर्चा चलेको छ । यो अवसर पनि जिदानले दिए बेलको भाग्यमा पर्ने हो ।
यी खेलाडीको भविष्य पनि अन्यौलमा, जिदान बोल्न पनि रुचाउँदैनन्
एजेन्सी । रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी हुन् ग्यारेथ बेल । तर, प्रशिक्षक जिनेदान जिदान रियल आएपछि उनको करिअर नै धरापमा परेको छ । जिदानको रोजाइमा नपरेपछि उनले खेल्ने समय निकै कम पाउन थाले ।
जिदानलाई छैन रियल मड्रिडका यी खेलाडीहरुबाट आश
एजेन्सी । रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदान जिदान केही खेलाडीहरुको खेलदेखि आफु सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी केही खेलाडीहरु बेच्न चाहन्छन् ।
जिदान यी पाँच खेलाडी रियल मड्रिडमा अनुबन्ध गर्न चाहन्छन्, कति सम्भव कति असम्भव ?
एजेन्सी । रियल मड्रिड नयाँ खेलाडीको खोजीमा रहेको छ । क्लबमा रहेका पुराना केही खेलाडीहरुलाई बिदा गर्ने योजनामा पनि रियल रहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । रियलका केही खेलाडीहरुले यसबारे खुलेरै बोलेका छन् ।
जिदान चाँडै प्रशिक्षकको रुपमा फर्कने
एजेन्सी । जिनेदिन जिदान पुनः प्रशिक्षकको रुपमा फर्किने भएका छन् । आइतबार टिभीईसँग कुरा गर्दै आफू प्रशिक्षकमा फर्किने बताएका हुन् ।